MIARAMILA TSY HITA POPOKA
Miaramila iray no tsy hita popoka hatramin’izao ary nentin’ny dahalo any anaty ala any. Voatery nandefasana hélicoptère tao Miandrivazo sy ny manodidina azy mba hanaovana fisafoana ny toerana rehetra mety hahitàna azy. Miaramila fito izay mpampandry tany no nanao fanarahan-dia ny dahalo taorian’ny fanafihana izay nitranga ny alatsinainy teo. Tsy hita faty tsy hita velona ny iray tamin’izy ireo hatreto ary mitohy ny fikarohana azy izay nampiasàna angidim-by mihitsy.
Tsy maintsy hanao tombana izay zavabitan'ny minisitra ny filoha vao hanova ny governemanta. Efa tsapa anefa fa misy ministra tsy nahavita tsara ny asany ary nanaratsy endrika ny governemanta. Mbola ny fanendrena ny praiministra no mahamaika ny filoha amin'izao fotoana izao ary koa hifidy izay ho filohan’ny antenimieram-pirenena. Miady an-trano rahateo ny antoko izay tarihiny satria olona roa eo anivon’izany no samy te-hitondra io antenimeram-pirenena io.
MATY TENY AN-DALANA
Maty tampoka teny an-dàlana ilay rangahy omaly atoandro, tetsy Ambatomaro. Noezahin’izay nahita ihany ny nanavotra azy saingy teo ihany dia efa hita fa tsy misy hevitra intsony. Mpivaro-boky ao Ambohijatovo no asany ary manana aretina mitaiza izy dia ny aretim-bavony izany. Rehefa ririnina no tena mihetsika ny karazan’aretin’ny taova ary efa nitaraina mafy ho narary izy raha araka ny fitantaran’ny olona. Omaly raha handeha hamonjy ny asany dia nihinjitra tampoka ary namoy ny ainy.
FANADIHADIANA ANY AMBOHIMAHASOA
Mbola mitohy ny fihainoana ireo olo-be avy any Ambohimahasoa ao amin’ny sojaben’ny mpitsara mpanao famotorana. Izy ireo dia misy olom-boafidy ary koa misy tangalamena. Mahakasika ny fahafatesan’ny olona telo izay nariana tao amin’ny reniranon’Onive ity raharaha ity. Miaramila 27 no nidoboka am-ponja teny Tsiafahy ary nafindra eny Antanimora ny 20 tamin’izy ireo. Efa ho roa andro izay no nohainoana tsirairay teny amin’ny fitsaràna Anosy ireo olo-be voalaza etsy ambony.
Mihamafy hatrany ny tsy fitiavan’ny mpiasan’ny haino aman-jerim-panjakana ny mpitantana eo anivon’ny minisiteran’ny serasera. Raha nisy ny tsy nety tamin’ny fitantarana mivantana ny matso tamin’ny fetim-pirenena dia ny tonian-dahatsoratra teo anivon’ny Tvm roa no indray nisaoty. Mitombo ny hasosorana satria tsy mba tonga tany amin’ny tompon’andraikitry ny minisitera izay nanome baiko ny tsy hisian’ny mpitandro ny filaminana mitantara ara-teknika mihitsy ny sazy fa ny ambany foana no mizaka ny vokany.
MPITONDRA SCOOTER KAROHANA
Karohina ny mpitondra scooter iray amin’izao fotoana. Nandeha tamin’ny lalan-tokana (sens unique) teny Ankadifotsy izy tsy mifanalavitra amin’ny hopitaly fiterahana izy no nandona ramatoa iray izay tsy nahtsiaro tena hatramin’ny omaly vokatry ny fahavoazana. Nitsoaka avy hatrany izy taorian’ilay heloka ary ny olona dia nifanampy tamin’ny fanavotana ny naratra. Nisy koa ny vavolombelona izay namariparitra ny mombamomba ity lehilahy tsisy saina ity.
Misy indray ny mponina izay manizingizina ny tokony hamoahana ilay depiote lany tany Fandriana. Maro anefa no vesatra iampangana azy tao amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany. Mbola ela vao ho tany tan-dalana ity firenena malagasy ity